Moto G cusub ee cusub 2014 wuxuu horeyba u helayaa Android 5.0 | Androidsis
Moto G waa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee cusbooneysiiya Android 5.0
Alfonso de Frutos | | Motorola, Noticias, Noocyada Android
Dhowr saacadood ka hor lamaanahayga Francisco Ruiz Waxaan kugu wargaliyay in Moto G 2014-ka cusub uu noqon karo mid kamid ah taleefannada casriga ah ee ugu horreeya ee hela casriyeynta ugu dambeysa ee nidaamka hawlgalka Google. Hagaag, Motorola markale ayey sameysay. Haa, waxay u gudubtay heerka Nexus isagoo ah Moto G 2014 kii ugu horreeyay ee casriga ah ee qaata Android 5.0 Lollipop.
Waana intaas qaar US iyo Kanadiyaan isticmaalaya horeyba waxaad uga heshay cusbooneysiinta OTA. Waxaan ka hadleynaa OTA rasmi ah, malaha ROMS loo kariyey sida kan Nexus 5. Iyadoo la tixgelinayo in asalka Moto G uu leeyahay astaamo aad ugu eg nooca horeyba u lahaa qaybtiisa Lollipop, uma maleynayo inay waqti dheer qaadaneyso sidoo kale in la cusbooneysiiyo cusbooneysiinta OTA. In kastoo laga yaabo inay dib u dhigaan cusbooneysiinta si loo kala saaro labada qalab xoogaa.
Moto G 2014 horeyba wuxuu u lahaa Android 5.0
Moodellada helaya OTA waxay u dhigmaan kan noocyada XT1063, XT1064, XT1068 iyo XT 1069. U dhiganta Waqooyiga Ameerika. Sidaa darteed haddii aad nasiib u yeelato inaad haysato mid ka mid ah moodooyinkaas, si dhakhso ah goor dambe ayaa cusbooneysiinta loogu talagalay Android 5.0 Lollipop ayaa imaan doonta, taas oo culeyskeedu yahay 368,7 MB ay kuu soo bandhigi doonto dhammaan wararka ku hoos jira Naqshadaynta Qalabka. Uma maleynayo inayna waqti dheer ku qaadan doonin cusbooneysiintan inay ku soo degto Yurub.
Motorola runti wax qalad ah ma sameyn kartaa? Okay, ka timid Faransiiska waxay sheegeen in Moto Maxx uusan imaan doonin Yurub. Xaqiiqadan waxaan u arkaa inay tahay kaliya guuldarada shirkada soo gaadhay, iyo in ka badan wax kasta oo aan u idhaahdo xanaaqa aan qaatay sababta oo ah waxaan si daacad ah u jeclahay taleefankaas.
Runtu waa taas soo saaraha dhawaan ay iibsatay Lenovo runti sifiican buu wax u wadaa. Xaqiiqda ah in Moto G 2014 uu yahay taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee qaata Android 5.0 Lollipop waxay uga tagtaa inta badan soo saarayaasha meel aad u xun.
Marka hore, maxaa yeelay Motorola waxay go'aansatay inay cusboonaysiiso moobilkeeda casriga ah bartamaha heerka koowaad marka hore. Tallaabadan ayay Motorola ku dishay laba shimbir hal dhagax. Waxay marka hore muujineysaa in a dhexdhexaad, oo leh 1GB oo RAM ah wuxuu ku shaqeyn karaa Android 5.0 Lollipop si habsami leh.
Dhinaca kale, waxay uga tagaysaa tartamayaasheeda meel aad u xun. Sidee ayey u noqon kartaa in Android 5.0 Lollipop uu gaaro Moto G 2014 ka hor dhamaadka sare ee Samsung ama LG, ama xitaa ka sii xun, Nexus 5? Halka ay run tahay taas waxaa jira ROMS horey loogu kariyey Nexus 5, laakiin wali ma helin cusbooneysi rasmi ah.
Dhaqdhaqaaqyadan Motorola waxay kasbataa taageerayaal badan maalin kasta. Ha u gariiraan shirkadaha waaweyni maxaa yeelay midowga Motorola iyo Lenovo wax badan buu ka hadlayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto G waa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee cusbooneysiiya Android 5.0
Daniel Rodriguez dijo
Laakiin markaa la mid ah isbarbardhiga shirkadaha kale (sony, samsung, htc, Huawei, iwm.) Motorola ma keenayso lakab u gaar ah sida shirkadahaan oo kale markaa way fududahay in lagu cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeya, sidoo kale mooto g ma haysto qalab ama softiweer sida ugu horumarsan ee moto x 2014 iyo 2013 sidaa darteed motorola waxay doorteen inay cusbooneysiiyaan mootada g 2014 marka hore.
Salaan ka timid Kolombiya.
Jawaab Daniel Rodriguez
AnTuTu waxay ku daabacdaa warbixin 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu fiican
Sida ugu fudud ee loo shaashado shaashadda Android 4.4+